Iiseva zeVPS Cloud
Ngentlawulo yomzuzu ngamnye
Ukukhuselwa kwewebhusayithi nakweliphi na inqanaba
Ulawulo lweerekhodi lwasimahla
Ukugcinwa kwedatha yayo nayiphi na isayizi
Ngokubhalisa, uyavumelana nemigaqo Nikela.
I-Scalable, iyanyamezela iimpazamo, kunye nentlawulo yomzuzu ngamnye.
Isixa esingenamkhawulo sedatha
Ngokwe gigabyte billing
Izikhongozeli zabucala nezikawonke-wonke
I-S3 kunye ne-Swift API iyahambelana
Iibrendi ezithembekileyo kuphela
Khupha kwimizuzu emi-2.
Uhlaziyo oluzenzekelayo uphawu
Ilifu elilula. I-devs eyonwabileyo. Iziphumo ezingcono.
Sebenzisa kwaye uvavanye isoftware kwihardware enamandla kunye nokwabelana ngeprojekthi engama-24/7 ukusuka naphi na emhlabeni ukuze usebenze ngokubambisana.
Sebenzisa iiseva zenyani ezingayekiyo kunye neseti eqinisekisiweyo yezibonelelo kunye needilesi ezinikezelweyo ze-IP ukusingatha naliphi na inani leendawo, ii-database kunye nezicelo zewebhu.
Yenza iidesktop ezinomboniso ogcweleyo, uthungelwano lwabucala lwenyani, kunye neeseva zommeli ukuze uhlale ungaziwa kwi-intanethi.
Dlulisela isiseko se-IT senkampani yakho, i-imeyile yenkampani, iinkqubo zeCRM, ucwangciso-mali, njl.njl. kwilifu elikhuselekileyo, ukonga kuhlaziyo kunye nokugcinwa kwepaki yakho ye-IT.
Siqinisekisa ukufumaneka okuphezulu kunye nembuyekezo yemali kwimeko yokwaphulwa kwezalathi ze-SLA.
Sisebenzisa izixhobo ezikumgangatho weshishini ezivela kubavelisi abahamba phambili behlabathi.
Bhatala njengokuba usiya
Iinkonzo zethu zihlawuliswa rhoqo ngemizuzu eli-10, kwaye uhlawuliswa kuphela izixhobo ezisetyenzisiweyo.
Iziseko zophuhliso ezithembekileyo nezinamandla
Iziseko zethu zibekwe kumaziko edatha aqinisekisiweyo e-EU nase-USA kunye ne-24/7 yokucupha ividiyo.
I-24/7 yeNkxaso yobuGcisa kunye neeNtengiso
Inkxaso yobugcisa isebenza ubusuku nemini kwaye ilungele ukubonelela ngoncedo olufanelekileyo nangaliphi na ixesha.
I-Visa, i-MasterCard, i-American Express, i-Discover, i-JCB, kunye ne-Diners Club International ziphakathi kwamakhadi etyala, idebhithi, kunye ne-prepaid esiwamkelayo.
Ujongano lwephaneli yolawulo
Lawula zonke iinkonzo ngendlela elula necacileyo
Ukuba eyona njongo iphambili yeNetooze kukubonelela ngelona nqanaba liphezulu lenkonzo kunye nenkxaso kubo bonke abathengi bayo, baye bayifeza loo njongo. Indlela yabo yokusebenza kunye namaqela ethu ukuxhasa uphuhliso lwethu kunye neemfuno ezilandelayo ziye zasivumela ukuba siqalise iwebhusayithi yethu ngexesha lokurekhoda. Nanini na ndifuna uncedo. INetooze iye yaphakama ngokukhawuleza. Umntu uhlala ephumelela ukukunceda iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Enkosi kakhulu.
Ukukhetha umboneleli wokubamba othembekileyo sesinye sezona zigqibo zibalulekileyo oza kuzenza. I-Netooze yimpendulo yayo nayiphi na ibhlog okanye iwebhusayithi ye-ecommerce, iWordPress, okanye uluntu/iforum. Subanexhala. I-Itchysilk inika uninzi lwempumelelo yayo kukuqina kwesiseko sethu (ukusingatha). Ukusukela oko sabhekiswa kwi-Netooze ngo-2021/22, sifumene amaxabiso afanayo, amandla akwinqanaba elilandelayo kunye nokusebenza, kwaye iwebhusayithi yethu ikhawuleza kakhulu.
I-Splendid Chauffeurs bubunewunewu obubodwa be-Splendid yenkonzo yokuqhuba ekusa kwindawo oya kuyo ngesitayile kunye nokuthuthuzela. Xa sikhetha inkampani yokubamba, siye sajonga kwiindidi ezahlukeneyo, eyona nto ibalulekileyo yayilukhuseleko kunye nenkonzo ekhethekileyo yabathengi kunye nesisombululo semiba. Siyifumene iNetooze ngophando lwethu; Udumo lwabo lubalaseleyo, kwaye sinamava ngokuthe ngqo kwindlela abasabela ngayo.
Qala uhambo lwakho lwamafu? Thatha inyathelo lokuqala ngoku.
27 Old Gloucester Street , London, EUnited Kingdom WC1N 3AX
Yenziwe ngu drozd.red
Ngokucofa iqhosha, uyavumelana nemigaqo Nikela.